ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သော Cream မှအရည်အသွေးမြင့် အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သော Cream ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ကြှနျုပျတို့မှာ Taiwan ငွေရတတ်သောသူအရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ပို့ကုန်နှင့်စက်ရုံမှာ အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သော Cream ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည် သာ. ထက် 8 နှစ်အထူးထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံတင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစံချိန်စံညွှန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမိန့်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝယ်လိုအားထမ်းဆောင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါကလွတ်လပ်စွာကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သော Cream ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သော Cream ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သော Cream ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
MONIFACE နွေရာသီမျက်လုံး/မျက်နှာပြုပြင်ရေးမျက်နှာပြင် ပိုမိုမြင့်မားသော moisturizing နှင့်ရုတ်သိမ်းနွေရာသီဖော်မြူလာသည်လန်းဆန်းစေပြီးစိုထိုင်းစေသည်,အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးသင့်လျော်သည်,မျက်စိနှင့်မျက်နှာအဘို့အသင့်လျော်သင့်အသားအရေအတွက်ခရီးအသစ်မူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သီးသန့်ပုံသေနည်းအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ:hyaluronic အက်ဆစ်,ကော်လာဂျင်,ganoderma,သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်ရေ,jojoba ရေနံ,rosehip ရေနံထိရောက်မှု:Whitening အသားအရေ.မှောင်ခြင်းကိုပေါ့စေနိုင်သည်,ချောမွေ့ချောမွေ့,အရေပြားလိုင်းများကိုဆန့်,အရေပြားဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်,နှင့်အသားအရေတောက်ပစေသည်ဘေးကင်းရေး:မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနှင့် steroids အခမဲ့ဖြစ်သည်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖောင့်အရွယ်အစား:05000256တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှုအမှတ်.I660119 တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အမှတ်.M556284စွမ်းရည်:30mlအသုံးပြုနည်း:နံနက်ခင်းနှင့်ည ဦး ယံ၌အရေပြားကိုသန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်,ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသောအရေပြားပေါ်တွင်အနည်းငယ်နှစ်ပါ,ညင်ညင်သာသာအကြောင်းကိုဆယ်စက္ကန့်ပွတ်ပေးပါ,အနည်းငယ်နွေးထွေးမှုရှိရလိမ့်မည်,ထို့နောက်သင့်လျော်သောငွေပမာဏကိုလျှောက်ထားပါ